ကူမင်မြို့မှ ထွက်ခွာလာသော ပထမဆုံး တရုတ်-လာအို အမြန်ကုန်တင်ရထား ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဗီယင်ကျန်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့မှ စတင်ထွက်ခွာလာသော ပထမဆုံး တရုတ်-လာအို အမြန်ကုန်တင်ရထားကြီးသည် လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ စနေနေ့ ညပိုင်းက ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အတန်းအစားဝင် ဒယ်လ်စီယံဖေါ့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာများ နှင့်အတူ ကုန်စည်အပြည့်တင်ဆောင်လာသော ရထားကြီးသည် စနေနေ့ည ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ဗီယင်ကျန်းမြို့တောင်ပိုင်းရှိ ရထားဘူတာရုံသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ လာအိုနိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက် ပေါင်းကူးဆက်နွယ် ပေးသူတစ်ဦးအနေနဲ့ရော ရပ်ဝန်းနဲ့ပိုးလမ်းမဖော်ဆောင်မှုမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ပါ သိပ်ကို ကျေနပ်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ် ” ဟု ရထားမောင်းအတွေ့အကြုံ ၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အဆိုပါ အမြန်ကုန်တင်ရထားမောင်း Zhou Yukui က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်-လာအို အမြန်ရထားလမ်း၏ မိုဟန်ရထားလမ်းပိုင်း နယ်စပ်ဂိတ် ဖြတ်သန်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ကုန်တင်ရထားကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းပိုင်းဟာ ပြည်တွင်းရထားလမ်းပိုင်းတွေနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ ရထားလမ်းအနေအထားက ပိုကောင်းတယ်လို့ တောင် ပြောလို့ရပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အမြန်ရထားဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လာအို-တရုတ် နယ်စပ်ကို စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန် ၁၅၃၉ နာရီ ( ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၀၈၃၉ နာရီ) ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ လုံးဝ နားနေအိပ်စက်မှု မလုပ်တော့ပါဘူး ” ဟု Zhou က ဆိုသည်။
ဗီယင်ကျန်း တောင်ပိုင်းရထားဘူတာရုံ ညွှန်ကြားရေးမှူး Li Tongxu သည် ရထားပို့ဆောင်ရေးတွင် လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဘူတာရုံ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ၁၀ နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့သော နှစ် ဇူလိုင်လက လာအိုနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်းက တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆိုက်ရောက်လာမည့် အမြန်ရထားကြီးအား ကြိုဆိုရန် ဗီယင်ကျန်းတောင်ပိုင်းဘူတာရုံကြီး၌ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကို အပြည့်အဝ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဘူတာရုံ၌ လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြည့်ဝသော ရထားလမ်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူ ၉ ဦးအပါအဝင် အမှုထမ်း စုစုပေါင်း ၆၈ ဦးဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ကျန်သူများအားလုံးမှာ လာအိုနိုင်ငံမှ အမှုထမ်းများဖြစ်ပြီး တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းကုမ္ပဏီတွင် သင်တန်းတက်ရောက်လေ့လာသင်ယူပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ပညာအရည်အချင်း စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အတူ ရာထူးနေရာအဆင့်ဆင့်ဖြင့် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ခံထားရသူများဖြစ်သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံကနေ မနေ့က စတင်ထွက်ခွာလာတဲ့ ပထမဆုံး ကုန်တင်ရထားကြီးဟာ လာအိုနိုင်ငံအတွက် ပိုတက်စီယံတွေ သယ်ဆောင်လာပေးပါတယ် ” ဟု Li က ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၌ ပိုတက်စီယံအားဖြည့် ဓာတ်မြေဩဇာများမှာ ပိုလျှံအောင် လုံလောက်မှုရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ ဒီနေ့မှာတော့ တစ်တွဲကို အရှည် ၆ မီတာရှိတဲ့ ရထားတွဲကြီး ၅၀ တွဲ နဲ့ သယ်ဆောင်လာပေးမယ့် ဒယ်လ်စီယံဖေါ့စဖိတ်တွေကို ဒီမှာလက်ခံရရှိမှာပါ ၊ ဒါဟာ ဈေးကွက်နှစ်ရဲ့ အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်မှု ဆက်ဆံရေးအပိုင်းကို ရောင်ပြန်ဟတ်စေပါတယ်” ဟု Li က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရထားလမ်းပိုင်းသစ် ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းသည် တရုတ် နှင့် လာအို နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက် အချိန် နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာ သက်သာစေပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရထားလမ်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးက ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိကြောင်း ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဗီယင်ကျန်းတောင်ပိုင်းရထားဘူတာရုံမှ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ပို့ဆောင်ရန် ကုန်စည်တန်ချိန်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လာအိုနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်မည့် အထူးသဖြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ၊ ဓာတုပစ္စည်း ၊ စက်ပစ္စည်း နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစသည့် ထုတ်ကုန်များစွာ စောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်-လာအို အမြန်ရထားလမ်းကြီးကို သောကြာနေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လာအိုနိုင်ငံမှ ကုန်စည်များတင်ဆောင်ထားပြီး ဗီယင်ကျန်းမြို့မှ ထွက်ခွာလာသော ပထမဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်တင်ရထားကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ စနေနေ့ ညနေပိုင်းက ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
VIENTIANE, Dec.5(Xinhua) — The first China-Laos Railway international freight train from Kunming of southwest China’s Yunnan Province arrived in Lao capital Vientiane on Saturday night.
“I am delighted and excited to beapractitioner of the Belt and Road Initiative, and an emissary of friendship between China and Laos,” said Zhou Yukui, 31, the freight train driver with six years of driving experience.
“The China-Laos Railway runs similar to the domestic railways and the railway conditions are even better. But in order to ensure the safety of the first train, since setting off from the Laos-China border at 1539 (GMT 0839), we dare not to takearest,” Zhou said.
Li Tongxu, Director of Vientiane South Station with more than 20 years’ experience on the railway and over 10 years asastation director in China, came to Laos in July this year. He told Xinhua that the station has been fully prepared to welcome the first train from China.
“The first train we sent back to China yesterday carried potash produced in Laos,” Li said, noting that China’s Yunnan Province has abundant phosphorus minerals.
“Today we are receiving 50 six-meter railway containers of dicalcium phosphate here, which reflecting the complementary relationship of the two markets,” added Li.
Currently orders bound for China from Vientiane South Station are more than 100,000 tons while shipment orders from China to Laos are alsoalot, especially for fertilizer, chemical, mechanical and electrical products.
China-Laos Railway was opened to traffic on Friday and the first international freight train from Vientiane loaded with Lao exports arrived in China on Saturday afternoon. Enditem